Madaxwayne Trump Oo Hakiyay Safar Uu ku Tagi lahaa Dalka UK, – Heemaal News Network
Madaxwayne Trump Oo Hakiyay Safar Uu ku Tagi lahaa Dalka UK,
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa baajiyay booqashadii la sii qorsheeyay ee uu ku tagi lahaa UK bisha Feebaraayo, wuxuuna sheegay in uusan “taageeraysanayn” safaaradda cusub ee Maraykanku uu ka dhistay London, taas oo la qorsheeyay in uu isagu furo.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa la filayay in uu furo safaaradan cusub oo ay ku baxday hal bilyan oo doolar, taas oo uu qorshaheeda lahaa madaxweynihii ka horreeyay ee Barack Obama, Trump ayaana ku tilmaamay “in fikraddaasi ay ahayd mid xun”.
Trump ayaa aqbalay casuumaad ay u fidisay boqoradda Ingiriiska ka dib markii Ra’iisulwasaaraha Britain Theresa May ay booqasho rasmi ah ku tagtay Maraykanka sannadkii hore.
Xafiiska Ra’iisulwasaaraha Britain ee Downing Street ayaa diiday in uu wax ka dhoho baajinta booqashada Trump ee UK.
Trump ayaa Twitterka ku soo qoray in uusan ku faraxsanayn in maamulkii Obama uu gaday safaaraddii hore ee Maraykanka ayna ku badasheen “laws”.
Wuxuu sheegay in dhismaha cusub ee Vauxhall ee Koonfurta London in ay “durugsan tahay” wuxuuna intaas ku daray “Ma inaan xariga ka rajaad rabtaan, Maya!”
BBC waxay fahamsan tahay in xafiiska Ra’iisulwasaaruhu uu qorshaynayo in booqashadaas loo wareejiyo dhammaadka sannadkan, si Trump uu markaas xariga uga jaro dhismaha boqoradda ee Buckingham Palace.
Dawlada Qadar Oo Imaaraatka Carabta Ku Eedaysay Inay Hawada Dalkeeda Ku Soo Xadgudubtay
Maxaad Ka Ogtahay Xorriyadaha Dheeraadka Ah Ee La Siiyay Haweenka Sucuudiga
CIA-da Oo Sheegtay in Aysan Waxba Iska Dhimin Faragelintii Uu Ruushka ku Hayay Maraykanka.
January 30, 2018 Caalamka
Agaasimaha CIA-da Mike Pompeo ayaa sheegay in aanay aad isku dhimin farogelinta Ruushku ka wado Yurub iyo Maraykanku tan iyo intii Moscow lagu eedeeyey inay farogelisay doorashadii 2016-kii. Wuxuu BBC-da u sheegay inu uu filayo […]
Xasan Sheekh Oo Loo Diiday Dalku Galka (Visa) Maraykanka
March 25, 2018 Soomaaliya
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo diiday dal-ku-galka Mareykanka (Visa), taasoo keentay in la joojiyo muxaarado uu ka jeedin lahaa xarunta Marriott Sable Oaks, 2ee Koonfurta Portland. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lagu […]
USA: Nancy Pelosi Oo Sas Ka Qaaday Weerarkii Las Vegas Dalbatayna Sharci Lagu Xakamaynaayo Hubka
October 3, 2017 Caalamka
Xildhibaanada Xisbiga Dimoqraadiga ee dalka Maraykanka ayaa dalbanaya in si aad ah loo adkeeyo sharciga haysashada hubka, kadib xasuuqii ka dhacay magaalada Las Vegas oo 64 jir Maraykan ah uu ku diley 59 qof dhaawacna […]